ShweMinThar: သားအိမ်အဝ-ကင်ဆာ ဆေးစစ်ခြင်း အသစ်ပြဌာန်းချက်
သားအိမ်အဝ-ကင်ဆာ ဆေးစစ်ခြင်း အသစ်ပြဌာန်းချက်
(သားအိမ်ခေါင်း) သားအိမ်အဝ-ကင်ဆာ ဆေးစစ်တာကို အရင်ကပြောသလောက် တခါနဲ့တခါ နီးကပ်စရာမလိုပါလို့ ၂ဝ၁၂ မတ်လမှာ ထုတ်ပြန်ချက်အသစ်တခု ထွက်လာပါတယ်။ တိတိကျကျပြောရရင် အသက် ၃ဝ နဲ့ ၆၅ နှစ်ကြား အမျိုးသမီးမှာ Pap Test နဲ့ HPV Test တွေက ကောင်းနေရင် အရင်ကလို ၃ နှစ်တခါ မဟုတ်တော့ဘဲ၊ ၅ နှစ်မှသာတခါ စစ်ဘို့ လိုပါမယ်။
• ဒီသတင်းထဲက HPV ဆိုတာ Human Papillomavirus ကြွက်နို့ဖြစ်စေတတ်တဲ့ ဗိုင်းရပ်စ် ကိုပြောတာပါ။ တကယ်လို့ Pap test တခုထဲသာ အားကိုးသူဆိုရင်တော့ ၂ဝဝ၃ ကတည်းကပြဌာန်းထားခဲ့သလိုဘဲ၊ ၃ နှစ်တခါ ဆေးစစ်ရပါမယ်။
• အရင် USPSTF guidelines လမ်းညွှန်ချက်အရ အမျိုးသမီးတိုင်း အသက် ၂၁ နှစ်ရောက်ရင် ဒါမှမဟုတ် လိင်မှုကိစ္စ တက်ကြွလာတဲ့အသက်နောက် ၃ နှစ်အတွင်း (ဘယ်ရက်က စောစော) သားအိမ်အဝ-ကင်ဆာ အတွက် ဆေးစစ်ဘို့ ဖြစ်တယ်။
• ကံကောင်းတာက အသက် ၂ဝ ကျော်စ မိန်းကလေးတွေမှာ HPV infections ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး ကူးစက်ခံရပေမဲ့ ဆေးမကုဘဲလဲ ပျောက်သွားနိုင်ကြတယ်။
• အသက် ၆၅ နှစ်ကျော်ရင် နောက်ဆုံး စမ်းတုံးက Pap tests ၃ ခါဆက်တိုက်၊ HPV tests ၂ ခါဆက်တိုက် အနုတ်ပြတယ်တိုရင် နောက်ထပ် ၁ဝ နှစ်အတွင်းမှာ ဆေးစစ်စရာ မလိုတော့ပါ။
• အမျိုးသမီးကြီးတွေမှာ Advanced precancer ကင်ဆာ-မဖြစ်ခင်အဆင့်လို့ ဆေး-ရာဇဝင် ရှိထားရင်တော့ အနှစ် ၂ဝ ကြာ ဆေးဆက်စစ်ရပါမယ်။
• တကယ်လို့ သားအိမ်ထုတ်တုံးက သားအိမ်အဝကိုပါ ထုတ်ထားရသူဆိုရင်၊ နောက်ပြီး ဆေးစစ်ချက်တွေကလဲ ရှင်းနေသူဆိုရင်တော့ ဆေးစစ်ဘို့ မလိုတော့ပါ။
• လမ်းညွှန်ချက်ထဲမှာ အရင်က Cervical cancer ဖြစ်ဘူးရင်၊ ဒါမှမဟုတ် Diethylstilbestrol (DES) (အီစထိုဂျင်) ဆေး ရဘူးထားရင်၊ ဒါမှမဟုတ် HIV ခုခံအားကျနေသူဖြစ်ရင် ဆေးစစ်တာ ပိုနီးကပ်ရပါမယ်။
Cervical Cancer သားအိမ်အဝ-ကင်ဆာ ဆိုတာ
(သားအိမ်ခေါင်း) လို့လဲခေါ်တယ်။ သားအိမ်အဝမှာရှိတဲ့ (ဆဲလ်) လေးတွေက ပုံမှန်မဟုတ် ဖြစ်လာတာ၊ ဘေးပြန့်လာတာကို ခေါ်တယ်။ စောစောသိပြီး ဆေးကုသရင် အလွန် သက်သာရာ ရတယ်။ ပျောက်အောင် ကုနိုင်တယ်လို့တောင် ပြောနိုင်တယ်။
• Unusual vaginal discharge ဗဂျိုင်းနားကနေ တခုခုဆင်းမယ်၊
• Vaginal bleeding between periods ကြားရက်သွေးဆင်းမယ်၊
• Bleeding after menopause သွေးဆုံးပြီးတာ မှန်ပေမဲ့ သွေးဆင်းလာမယ်၊
• Bleeding or pain during sex လိင်ဆက်ဆံစဉ်မှာ နာစရာမဟုတ်ဘဲ နာမယ်၊ သွေးဆင်းမယ်၊
Top Cause အများဆုံးဖြစ်စေနိုင်တဲ့ တရားခံ
Human papillomavirus (HPV) ခေါ်တဲ့ ဗိုင်းရပ်စ် အုပ်စုဖြစ်တယ်။ အမျိုးအစား ခိုးသား ၄ဝ ရှိတယ်။ တချို့က ပိုဖြစ်စေနိုင်တယ်။ Genital HPV infections လိင်လမ်းကို ဒီပိုးမျိုးဝဝင်ပေမဲ့ အများအားဖြင့် သူ့ဖါသူပျောက်နိုင်ပါတယ်။ မပျောက်ဘဲ နာတာရှည်ဖြစ်လာရင်တော့ သားအိမ်အဝက (ဆဲလ်) တွေ မူပြောင်းလာမယ်။ ဒါကနေ ကင်ဆာဖြစ်လာနိုင်တယ်။ ၉ဝ% သော သားအိမ်အဝ-ကင်ဆာက ဒါကနေဖြစ်တယ်။
HPV Symptoms ပိုးဝင်တဲ့ လက္ခဏာတွေ
ပိုးဝင်တာခံရပေမဲ့ ဘာမှမဖြစ်သလိုနေနိုင်တယ်။ သူ့အလိုလိုလဲ ပျောက်နိုင်တယ်။ တချိုကအမျိုးအစားတွေက Genital warts လိင်လမ်း-ရေယုံဖြစ်စေတယ်။ ဒီအမျိုးအစားတွေက ကင်ဆာ ဖြစ်စေတာတွေနဲ့ မတူကြပါ။ လိင်လမ်း-ရေယုံကနေလဲ aq;rukayrJh ကင်ဆာကိုပြောင်းမသွားစေပါ။ ဘာမှ ဒုက္ခမပေးသေးတဲ့ အကောင်တွေကသာ ကင်ဆာဖြစ်လာစေနိုင်တယ်။ အဲလိုရှိနေတာ နှစ်တွေနဲ့ကြာနေနိုင်တယ်။
Risk for HPV ဘယ်လိုလူတွေမှာ အန္တရာယ်ရှိသလဲ
ယောက်ျားဖြစ်ဖြစ်၊ မိန်းမဖြစ်ဖြစ် လိင်ဆက်ဆက်မှုရှိသူတွေမှာသာ ပိုအဖြစ်များတယ်။ လိင်ဆက်ဆံရာကနေ တချိန်ချိန်မှာ တယောက်ယောက်ဆီကနေ ပိုးကူးစက်လာတာ ခံရနိုင်တယ်။ ဘာမှခံစားနေရတာ မဟုတ်ပေမဲ့ သူများကိုတော့ ကူးစက်စေနိုင်တယ်။ Condoms (ကွန်ဒွမ်) သုံးတာက အများကြီး အခွင့်အလမ်း နည်းစေတယ်။ လုံးဝ မကူးဘူးတော့ မပြောနိုင်ပါ။ HPV ပိုးတွေဟာ သားအိမ်အဝသာမက၊ Vagina ဗဂျိုင်းနား = မွေးလမ်းကြောင်း၊ Vulva မိန်းမကိုယ်၊ Penis ယောက်ျား လိင်အင်္ဂါ၊ ယောက်ျား-မိန်းမ စအိုနဲ့ ခံတွင်း-ကင်ဆာတွေလဲ ဖြစ်စေနိုင်သေးတယ်။
How HPV Causes Cervical Cancer ဒီပိုးကနေ ကင်ဆာ ဘယ်လိုဖြစ်လာသလဲ
ကင်ဆာဖြစ်စေဘို့ များတဲ့ပိုးအမျိုးအစား ကူးစက်တာခံထားရရင် ကိုယ်ထဲမှာ အကြီးနေရာကနေ သားအိမ်အဝမှာ ရှိကြတဲ့ (ဆဲလ်) လေးတွေကို မူ-ပုံစံပြောင်းစေမယ်။ ဒီအဆင့်ကို Precancerous changes ကင်ဆာမဖြစ်ခင်ပြောင်းလဲမှုလို့ ခေါ်တယ်။ ကင်ဆာလူနာ မဟုတ်ပါ။ ကြာလာရင်တော့ Cancer cells ကင်ဆာ-ဆဲလ်တွေ ဖြစ်လာချင် ဖြစ်လာနိုင်တယ်။ ဘေးကိုပြန့်လာမယ်။
• Hispanic and African-American women အဖြူမဟုတ်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေ၊
• Smokers ဆေးလိပ်သောက်သူတွေ၊
• Have many children ကလေးမွေး များသူတွေ၊
• Use birth control pills foralong time ကိုယ်ဝန်တားဆေး နှစ်ရှည်လများ သုံးသူတွေ၊
• HIV positive ခုခံအားကျဆင်းနေသူတွေ။
Pap Test (ပက်ပ်-တက်စ်) ဆိုတာ
အလွန်အောင်မြင်တဲ့ စမ်းသပ်နည်းတခုဖြစ်တယ်။ အစမ်းခံရတာ မနာဘူး။ ထုံဆေးသုံးပါတယ်။ သားအိမ်အဝကို ဂွမ်းစလေးနဲ့သုတ်ယူတာသာ ဖြစ်တယ်။
Pap Test Abnormal မကောင်းဘူးဆိုတာ
မကောင်းတာလေး နဲနဲတွေ့တယ်လို့ဆိုရင် ဆေးထပ်စစ်ရမယ်။ လိုအပ်ရင် Colposcopy ကရိယာနဲ့ကြည့်မယ်။ လိုသေးရင် Biopsy အသားစလေးဖြတ်ယူပြီး စစ်မယ်။ Precancerous abnormal cells တွေ့နေရင် ထုတ်ပြစ်ပေးမယ်။ ဖျက်ဆီးပေးမယ်။
Early Detection စောစောသိဘို့
တခါတလေ Pap test သာမကဘဲ HPV DNA Test ကိုလည်းလုပ်မယ်။ High-risk forms of HPV ပိုးအမျိုးအစားကို ခွဲခြားတာ ဖြစ်တယ်။ ကင်ဆာဖြစ်စေတဲ့ အကောင်လား သိချင်လို့ပါ။ အသက်မငယ်သူတွေကို လုပ်တာများတယ်။ Pap test က မူမှန်တာတွေလို့လဲ အရွယ်ငယ်ငယ်-ကြီးကြီး လုပ်မယ်။
အသားစ ဖြတ်ယူစစ်ဆေးနည်းနဲ့ ရောဂါကို သေခြာစေရတယ်။ Cervical tissue သားအိမ်အဝက (တစ်ရှူးစ) ကိုစစ်တာပါ။ ပုံမှန် (ဆဲလ်) တွေလား၊ Precancerous cells ကင်ဆာမဖြစ်ခင် (ဆဲလ်) တွေလား၊ Cancer cells ကင်ဆာ-ဆဲလ်တွေလား မှန်ဘီလူးနဲ့ စစ်တယ်။ မေ့ဆေးလိုတယ်။
Stages of Cervical Cancer ကင်ဆာ အဆင့်များ
1. Stage0ကင်ဆာ-ဆဲလ်တွေက သားအိမ်အဝ မျက်နှာပြင်မှာသာရှိနေသေးချိန်၊
2. Stage I ကင်ဆာ-ဆဲလ်တွေက သားအိမ်အဝကနေ ဘေး-တခြားမရောက်သေးချိန်၊
3. Stage II ကင်ဆာ-ဆဲလ်တွေက ဗဂျိုင်းနား အပေါ်ပိုင်းအထိသာရောက်သေးချိန်၊
4. Stage III ကင်ဆာ-ဆဲလ်တွေက ဗဂျိုင်းနားအောက်ပိုင်းရောက်ပြီး ဆီးလမ်းကိုလဲ ပိတ်ချင်ပိတ်လာချိန်၊
5. Stage IV ဆီးအိမ်၊ အစာဟောင်းအိမ်၊ တခြားနေရာတွေအထိရောက်နေချိန်။
Stage II ထက်မကျော်သေးရင် ခွဲစိတ်မယ်။ Hysterectomy သားအိမ်နဲ့တခါတည်း သားအိမ်အဝကိုပါ ထုတ်ပြစ်မယ်။ ဘေးနားက ထုတ်သင့်တာတွေလဲ ထုတ်မယ်။ ဥပမာ သားအိမ်ပြွန်၊ မျိုးဥအိမ်၊ (လင့်ဖ်-နုတ်) တက်စေ့တွေ။
External radiation therapy ခေါ်တယ်။ High-energy X-rays ပြင်းအားများတာသုံးတယ်။ ကင်ဆာ-ဆဲလ်တွေကို သေစေတယ်။ ခွဲစိတ်တုံးက မမြင်နိုင်လို့ ကျန်နေတာရှိရင်လဲ သေစေမယ်။ Internal radiation နည်းကို Brachytherapy ခေါ်တယ်။ ရေဒီယိုသတ္တိကြွပစ္စည်းကို ကင်ဆာနေရာမှာ ထည့်ပေးနည်း ဖြစ်တယ်။ များသောအားဖြင့် ဓါတ်ကင်နည်းနဲ့ ဆေးပေးကုသနည်း တွဲလုပ်ပေးတယ်။ ဆေး အပြင်းတွေကြောင့် သွေးဖြူဥနည်းတာ၊ မောပန်းတာ၊ အစာမကျေတာ၊ ပျို့-အန်တာ၊ ဝမ်းပျက်တာတွေ ဖြစ်စေနိုင်တယ်။
ဆေးကြောင့် တကိုယ်လုံးမှာ ရောက်နေသမျှ ကင်ဆာ-ဆဲလ်တွေကို သက်ရောက်စေနိုင်တယ်။ ပြန့်နေတဲ့အဆင့်အတွက် အသုံးကျတယ်။ မောပန်းတာ၊ ဆံပင်ကျွတ်တာ၊ သွေးယိုလွယ်တာ။ ပျို့-အန်တာ၊ အစားပျက်တာတွေ ဖြစ်စေနိုင်တယ်။
Coping With Cancer Treatments
ကင်ဆာဖြစ်နေလို့ကုသတာကနေ လူကိုတော့ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်စေမှာ အမှန်ပါ။ ဒါပေမဲ့ အဆိုးကြီးအတွက် ဒိလောက်မဆိုးတာနဲ့ လဲရတာ ကောင်းစေပါတယ်။ အစာအာဟာရပြည့်ဝ-မျှတအောင်စားပါ။ လူကလဲ တတ်စွမ်းသလောက် တက်ကြွမှုရှိနေပါစေ။ သက်တောင့်သက်သာ ကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါ။
Cervical Cancer and Fertility
သားအိမ်-ကင်ဆာကို ဆေးကုရတာကနေ ကလေးမရစေတာဖြစ်စေနိုင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ စောစောသိလို့ ဆေးသေခြာကုသရင် တချိန်မှာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နိုင်ပါသေးတယ်။
Survival Rates for Cervical Cancer ဘယ်လောက်ကြာကြာ ကောင်းနေမှာလဲ
စောစောသိတာ၊ ဆေးကုသနည်းတွေအပေါ် မူတည်တယ်။ ကိုယ်ခံအားအပေါ်လဲ မူတည်တယ်။ ၁၅% ကနေ ၉၃% အထိ ၅ နှစ်သက်တမ်းရှိတယ်လို့ လေ့လာမှုတွေကဆိုတယ်။ ဒီကိန်းဂဏန်းတွေက ၂ဝဝဝ နဲ့ ၂ဝဝ၃ တုံးကရထားတာမို့ နောက်ပိုင်းမှာ ပိုကောင်းစရာသာရှိပါတယ်။ တယောက်နဲ့တယောက် မတူတာကို ကံတရားလို့ပြောရင် မှန်ပါတယ်။
Cervical Cancer Vaccine ကာကွယ်ဆေး
Cervarix နဲ့ Gardasil ဆိုပြီး ကာကွယ်ဆေး ၂ မျိုးရှိနေပြီ။ ၆ လအတွင်း ၃ ခါထိုးရမယ်။ သားအိမ်အဝ-ကင်ဆာကို ၇ဝ% ကာကွယ်နိုင်တယ်။ Gardasil ဆေးက Genital warts ကိုဖြစ်စေတဲ့ ပိုး ၂ မျိုးကိုပါ ကာကွယ်နိုင်တယ်။ ကာကွယ်ဆေးကို အသက် ၁၁-၁၂ နှစ်သမီးအရွယ်ကတည်းက ထိုးဘို့ CDC က အကြံပြုထားတယ်။ ငယ်တုံးက မထိုးရသေးရင် ၁၃ နှစ်ကနေ ၂၆ နှစ်အထိလဲ ထိုးသင့်ပါတယ်။
ဒေါက်တာတင့်ဆွေ (၁၇-၃-၂ဝ၁၂ )
ဒေါက်တာတင့်ဆွေ - သားအိမ်အဝ-ကင်ဆာ ဆေးစစ်ခြင်း အသစ်ပြဌာန်းချက်
Labels: Health, ဆောင်းပါး
အမျိုးသားများ ကျူးလွန်တတ်တဲ့ အမှား (၉) ချက်
HIV နဲ့ကျန်းမာအောင်နေထိုင်နည်း ၃ဝ
ငါးမင်းဆွေ ရဲ့ လက်ကမ်းစာ
အမျိုးသမီးတိုင်း လိုအပ်တဲ့ ဆေးစစ်ခြင်းများ
““ကျုံကူးရွာသား ဦးသိန်းစိန် (သို့မဟုတ်) စစ်ပုံမကျ...
၀ါရင့် သတင်းစာဆရာ လူထုဦးစိန်ဝင်းနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
ငါးနုပ်သန်းအိုးကပ်ချက်၊ ပဲကြီးဟင်းချို၊ မရမ်းသီးထေ...
ဆေးဝါးရရှိရေးအတွက် မျှော်လင့်ကာ PLWHA များ မဲပေးကြမည်
လိင်ကတဆင့် ကူးစက်ရောဂါများ အခြေခံ
ပုစွန်ကြက်သွန်ဖြူ ချဉ်စပ်ဟင်း၊ ကန်စွန်းရွက်ကြော်
မျိုးဆက်ပျံ့ပွားခြင်းဆိုင်ရာ အမျိုးသမီးများ အခွင့်...
Online ကနေ Photoshop သုံးကြရအောင်
Kegel exercise For Men and Women
သုညတွေဆီ လက်တွဲ လျှောက်လှမ်းရမယ့်ခရီး
ငါးပါးနီနဲ့ ပဲငါးပိအချိုနှပ်၊ ပုစွန်ခြောက် ငရုတ်သီ...